ubuhlungu Emuva isizathu engicasula kakhulu ngokufuna usizo lodokotela. Isizathu nokuhlanzeka kwangaphandle nokuziphatha kwabo zingakhiqiza yomgogodla lesi sifo, futhi isifo ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu noma thoracic, kokuhlala isikhathi eside isikhundla esisodwa noma umsebenzi okhandlayo. Ngokuvamile kutholakale imbangela ubuhlungu kuphela uhlaziye le ubuhlungu. Ngezinye izikhathi ngaphezu anamnesis futhi nesineke omotra Kufanele nifeze ukuhlolwa okukhethekile olwengeziwe. Ukwelashwa nokuvikelwa ubuhlungu incike imbangela ngokubukeka kwabo futhi zikhethwa ngokuqinile ngamunye isiguli ngasinye.
Okuvame kakhulu ubuhlungu emuva kukhona lezivakashi ngokwemvelo futhi akudingeki ukuba ukuphathwa ngendlela ekhethekile. Ngokuvamile, thina ngokuzimela isicelo namafutha ngoba ubuhlungu emuva, abaqondi izizathu nesenzakalo yayo. Nokho, ngezinye izikhathi ubuhlungu singenzeka ngenxa izifo, izimila, esingamahlalakhona semithambo, noma ukwa, futhi kudinga ukuzikhuza kanye kokungenela esisemqoka of onguchwepheshe.
Lapho ankylosing spondylitis iziguli ukuzwa ubuhlungu chronic. Ngokuvamile lesi sifo sithinta abantu abaneminyaka engu 30-40. Kulesi sifo sihlasela amalunga omzimba elincane oluchazayo yomgogodla amathambo ngabanye. Lapho ankylosing spondylitis emgogodleni komuntu kuthoma ukuba kuyaqina, iba buthakathaka. Ubuhlungu ngesikhathi ankylosing spondylitis ngokuvamile ngokulinganisela, nokunensa, wazizwa ikakhulukazi kule aphansi emuva, iyakhula ebusuku lapho ukuqamba amanga, ukwehla emini, ntambama. Lapho spondylitis ankylosing isicelo wamafutha iqolo imvelo eqeda ukuvuvukala (diclofenac, ibuprofen). Ukuxilongwa kanye nokwelashwa yalesi sifo wenziwa vertebrolog, podiatrists, neurologists.
Ngokuvamile, lapho sciatica ubuhlungu emuva zavele kakhulu. Lokhu ubuhlungu njalo ohlolayo (ukudubula), oyingozi futhi ithumba zombili ngemuva nasemilenzeni. Ngokuvamile ubuhlungu sciatica emuva kwenzeka ngemva zizwa amakhaza, izinsimbi, umsebenzi okukhulu. Radiculitis iqala kokucindezelwa Izinzwa izakhiwo ku intervertebral disc herniation. Ngokuvamile, sciatica kwenzeka kabuhlungu emgogodleni lumbar ephansi emuva, kulesi simo, ubuhlungu lukhipha.
Ngokuvamile, lezi izinhlungu kwenzeke izifo ezahlukene komgodi ongaphakathi kwamathumbu. I ezinkulu yezifo yangaphakathi izitho ezingaba avuse iqolo zihlanganisa isilonda peptic, pancreatitis, cholecystitis, colic kwezinso, urolithiasis, njll .. ubuhlungu Ngokuvamile emuva ezihambisana nesifo kwezinye izitho zangaphakathi kalula kudidaniswe yobuhlungu beqolo kanye emgogodleni izinkinga. Ngakho, isilonda duodenal noma esiswini, ngisho pancreatitis ngokuvamile kwenzeka ubuhlungu beqolo, okuyinto kuhambisana isilungulela, isicanucanu futhi ngezinye izikhathi nokuhlanza.
Ngo colic kwezinso, ubuhlungu obukhulu kwenzeka ohlangothini. Isiguli futhi uqala esekhala ukuchama kaningi, ubuhlungu besisu, isicanucanu. Nokho, kuthiwani uma sisebenzisa wamafutha ngenxa yobuhlungu emuva izifo ezifana, siletha imiphumela efiselekayo, bengavumi ukukunika, kodwa isikhathi elahlekile kungaholela edabukisayo. Ngakho, ikhambi ubuhlungu emuva kufanele udokotela.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuze umuntu ukuqeda ubuhlungu emuva, kubalulekile ukwelapha lesi sifo ecashile, okwaholela ukuvela yayo. Ngaphezu ukwelapha eyisisekelo isifo yeqolo esetshenziswa antiinflammatory izidakamizwa, analgesics futhi imisipha relaxants.
izidakamizwa Antiinflammatory zisetshenziselwa ukwelapha ubuhlungu emuva, zenziwa ngendlela amaphilisi, si, amafutha izixazululo imijovo. Nokho, esiswini isilonda wamafutha sisetshenziswa iqolo, njengoba amaphilisi e yilesi sifo, ingase ibe nomphumela ongemuhle.
Ukuze kuncishiswe spasm kwemisipha relaxants esetshenziswa. Zinciphisa imisipha ukungezwani, wehlise back ubuhlungu futhi kusize lula sokuvivinya umzimba umzimba. Kulokhu, evame kakhulu esetshenziswa Mydocalm.